Daawo Banaanbax Ka Dhacay Jowhar – Banaadir weyne
Daawo Banaanbax Ka Dhacay Jowhar
11-da Sebtember, 2017
Jowhar (WBW: The GBM) – Magaalada Jowhar ee hada lagu sheego iney magaalo madax u tahay waxa uu Xasan Shiikh Maxamuud Garguurte uu ugu magac-daray ‘Hir+Shabeele’, aa waxaa laga soo sheegayaa in maanta lagu banaanbaxay.
Dadka banaanbaxayay aa waxey ku dhawaaqayeen erayo ay ku diidan yihiin qabsoomida doorashada laga sheegayo Magaalada Jowhar.
Jamhuuriyadda Soomaaliya, Sideedaba, waxaa ay ka koobnaa jirtay 8 Gobol (Jubada Hoose, Jubada Sare, Banaadir, Hiiraan, Mudug, Bari, [Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed oo hada ah Somaliland ]) markii ay abuurantay 1-dii Luuliyo sanadkii 1960-kii.
Markaasi waxaa Habka Federaaliga u ololeyn jiray Shiikh Cali Jimcaale Baraaye, Xaaji Baraako, iyo Cabdulqaadir Soobe oo aad loo mucaaradi jiray waagaasi.
Sanadkii 1971-72-dii waxaa uu bilaabay in Gobolkii Banaadir uu u kala qeybiyo 3 gobol, isagoo ka kala dhigay Shabeelaha Hoose, Muqdisho iyo Shabeelaha Dhexe.
Gobolka keliya ee uusan kala qeybin waxaa uu ahaa Gobolka Hiiraan. Gobolka keliya ee uusan kala qeybin waxaa uu ahaa Gobolka Hiiraan. Hadii marka Siyaasada Federaaliga lagu saleeyo dib usoo celinta goboladii uu kala gooyay Kelitaliyehii Soomaaliya Jeneraal M. S. Barre, waxaa uu Gobolka Hiiraan uu xaq u leeyahay inuu toos u noqdo Dowlad Goboleed maadaama uu Gobolka Hiiraan yahay gobolka keliya ee uusan kala jarin Diktatoorihii Soomaaliya Jen. Siyaad.
Hadabo, halkii dib loo sixi lahaa qaladaadkaasi, ayaa hada lasii sharciyeynayaa qaladaadkii Kelitaliye Jeneraal Maxamed Siyaad Barre; iyo qaladaadkii uu abuuray Xasan Shiikh Maxamuud Garguurte mudadii la ahaa waa ‘Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya’.
Hada waxaa sii shrciyeynayo qaladaadkaasi Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo kamid ah Haraagii Kelitaliyehii Soomaaliya Jeneraal Maxamed Siyaad Barre isla markaana hada la leeyahay waa ‘Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya’.
Wixii war ah ee soo kusoo kordho, kala soco Warbaahinta Banaadir Weyne (WBW: The GBM [ Great Banadir Media]).
Mareykanka Oo Kordhinayo Weerarada Kooxda Daacish Ee Ku Sugan Soomaaliya
Muwaadin Soomaliyeed oo Loo Qabtay Weerar Ka Dhacay Magaaladda London
Sarkaal Katirsan Milatariga Soomaaliya oo sheegay in ciidamada Mareeykanka ay laayeen dad Rayid ah
Madaxweynaha oo caawa u Hoyday Berbera Iyo Tirada Mashaariic uu ka Furay Burco
Siyaasiga Cabdi Jiinow oo sheegay in laga gaabiyay wax ka qabashada Dagaal Beeleedka Shabeelaha Dhexe
RW Kheyre Oo La Kulmay Ra’isul Wasaaraha Itoobiya
Shabaab oo lagu eedeeyay inay dad rayid ah ku dileen deegaanka Ceel Cali
Madaxweyne Ruuxaani oo dib loo doortay